UGoogle akasafundi uGmail wakho ukubonisa intengiso ojolise kuyo | Iindaba zeGajethi
UGoogle akasafundi uGmail wakho ukubonisa intengiso ejolise kuyo
Wonke umntu uyazi (kwaye ukuba ubungazi, wamkelekile kwilizwe lokwenyani), ukuba xa uGoogle engasibizi mali ngenxa yeemveliso zayo, kungenxa yokuba siziziqu zethu. Elinye lamaphupha amabi elihlasele abasemagunyeni ixesha elide lelo UGoogle usibonelela ngenkonzo yeGmail ngokutshintshisana nokufunda ii-imeyile zethu ukusibonisa intengiso ejolise kuyo, enepesenti ephezulu kakhulu yokusebenza.
Nangona kunjalo, ngokolwazi lwamva nje, UGoogle uza kuyeka ukufunda umxholo weimeyile njengoko bekunjalo ngaphambili, Ke ngoko, olu hlobo lwencoko nge-imeyile alusayi kuphinda lube yinto yorhwebo lwedatha yentengiso.
Nangona kunjalo ... ngaba oku kuthetha ukuba iintengiso ziya kuyeka ukubonisa kuhlobo lwasimahla lweGmail? Akukho nto iqhubekayo kwinyani. UGoogle ufuna ukufumana ukuthembela kwicandelo lezamashishini, elihlawulela iinkonzo zeShishini likaGoogle, ke ithi izakuyeka ukufunda umxholo we-imeyile ngeenjongo zentengiso, uku qhubeka nokuzoba eminye imithombo onayo, njengokukhangela kwiinjini yakho okanye kwisikhangeli sakho sewebhu. Ngale ndlela, uGoogle ufuna ukuba icandelo leshishini lenze into yokuqala.
UGoogle ufumene amatyala ezenzo zeklasi ukusukela ngo-2011, xa kwaqinisekiswa ukuba iintengiso ezijolise kuzo ngokusekwe kumxholo we-imeyile ziyinyani. Nangona kunjalo, i-European Union ibisoloko ichasene nolu hlobo "lomsebenzi", olukhokelele inkampani ukuba ibuze kwimithombo yayo yolwazi. Nangona kunjalo, ayisosikhokelo somthetho se-European Union esityhalele uGoogle ukuba enze esi sigqibo, kodwa njengoko besitshilo ngaphambili, lenenjongo yokufumana intlonipho kwicandelo leshishini kwaye alikhuthaze G Suite.
Ucinga ntoni ngoGoogle ekugqibeleni eyeke ukufunda ii-imeyile zakho ukukubonisa intengiso ejolise kuyo? Akubonakali ngathi oku kuya kuba sisisombululo kwisifo esikhoyo kuzo zonke iimveliso zesoftware yasimahla esizifumana kuthungelwano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » UGoogle akasafundi uGmail wakho ukubonisa intengiso ejolise kuyo
Iifoto zikaGoogle zisusa enye yezona ndlela zibalaseleyo ndinazo
Ngoku ungathumela naluphi na uhlobo lwefayile ngo-WhatsApp